रक्षा नेपालमा बालबालिकामाथि चरम शोषण भएको आरोप ( पिडितको अपिल सहित ) - Merodesh.news
रक्षा नेपालमा बालबालिकामाथि चरम शोषण भएको आरोप ( पिडितको अपिल सहित )
मेरोदेश संबाददाता,काठमाडौं, १७ जेठ ।
सामाजिक संस्थाको रुपमा परिचित रक्षा नेपालको अनुसरणमा पुगेका बालबालिकामाथि चरम अत्याचार भएको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पुजा बोहोरा ‘नाम परिवर्तन’ले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर रक्षा नेपालको अनुसरणमा आईपुगेका बालबालिकाहरुमाथि ज्यादती भैरहेको बारेमा अध्ययन गरि कारबाही गर्न माँग गरेकी छन् । उनले भनिन्,‘म रक्षा नेपाल र सञ्चालक मेनुका थापाको बिरुद्धमा सडकमा आएकी होईन, उहाँले मलाई पर्दाखेरी साथ सहयोग गर्नुभयो, तर जति मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो भन्दा बढि ममाथि उहाँले अत्याचार गर्नुभयो, शोषण गर्नुभयो, जन्मदिने बा–आमा र घर परिवार छोडेर मलाई उहाँले रक्षा दिन्छु भनेर ल्याउनु भयो, राख्नुभयो मैले राती १२ बजेसम्म जुठा भाँडा माझेर पढ्नु पथ्र्यो ।’
उनले भनिन्,‘म मानसिक रुपमा कमजोर बनेकी थिएँ, त्यो बेलामा समेत उचित किसिमको माया पाउन सकिएन, हुन त जन्म दिने आमाजस्तै त कहाँ हुँदा रहेछन् कर्मकी आमा ?, उहाँले मेरो फेशबुकमा आँफैले स्टाट कारेको हाल्नु हुन्थ्यो, एकदिन जन्मदिने आमा भन्दा कर्म दिने आमा महान हुन्छन् भनेर उहाँले नै लेख्नु भएको हो, मेरो फेशबुकबाट उहाँ केटाहरुसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मलाई उल्टै गाली गर्ने र पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो, मैले कोरियाबाट जितेर ल्याएको मेडल समेत देख्न पाएको छैन्, उहाँले आफ्नो दराजमा राख्नुभएको छ ।’आफूले जति दुःख पाएपनि केही गरेर देखाउँनु छ भनेर हिम्मत नहारेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘आजको दिनमा पनि हिम्मत हारेकी छैन्, मजस्ता पीडितहरुको नाममा विदेशी डोनर्सहरुसँग पैसा माँग्ने, सामाग्रीहरु माँग्ने र आफन्तहरुलाई बाँड्ने गर्नुभएको छ, मैले विलासिताको लागि आधुनिक सामाग्रीहरु खोजेकी होईन, मेरो पढाईको लागि चाहिने सामानहरु थिए, बाहिर रक्षा नेपाल भित्र भच्छक नेपालको व्यबहार गरिन्छ, मेरो नाममा आएका अन्तरवार्ताहरु समाचारहरु सबै मेनुका थापाले नै लेख्नुभएको र भने गराए अुनसारका थिए, मेरो आफ्नो वास्तविकता मारेर उहाँको कुरालाई बोल्नुपथ्र्यो, त्यहाँ भित्रका पीडाहरु बाहिर भनेको खण्डमा मारिदिन्छु भन्ने खालका धम्की समेत दिनुहुन्थ्यो, मैले पैसा माँगे भने जहिले बाबाको नाममा सरापेर गालि गर्नुहुन्थ्यो म त्यतिबेला अति विक्षिप्त बन्थें ।’
तर होस्टलमा पैसा नदिएपछि मलाई होस्टलबाट म्यामले निकालि दिनुभयो । मलाई निकालेपछि पैसा तिरेको सुन्दैछु । सतुङ्गलमा कार्यक्रम हुँदा पनि मलाई र एन्ड्रियालाई नलगि त्यहि घरमा बस्न बाध्य बनाइन्थ्यो । मसँगै बस्ने एन्ड्रियालाई ‘त ड्रक्स खान्छस्, चुरोट खान्छेस्’ जस्ता नानाथरी आरोप लगाई पागल बनाईयो । मलाई भने २०७४ मंसिर १७ गते मध्यबानेश्वरमा रहेको माता पाथिभरा गल्र्स होस्टेलमा राखिदिनु भयो । रक्षा नेपालबाट विभिन्न लान्छना लगाएर महिमा, विशाल, अशोक, दिपेश, शिशिर, क्रिस, शुसिल, एन्ड्रिया र आस्थाको भाईलगायतलाई निकालियो । उनीहरु कहाँ र कुन अवस्थामा छन् ? खोजी गरियोस् । होस्टेल राखेपछि मलाई कहिले पनि रक्षा नेपाल लगिएन । पछि होस्टल सेतोपुलमा सारियो । होस्टेलमा पैसा नतिरेको कारण होस्टेल सञ्चालक रुपाली गुरागाईले मलाई जहिल्यै कोठा सारिरहने गर्नुहुन्थ्यो ।
मलाई पढाइमा बाधा हुन्थ्थो । तैपनि पढ्छु भन्दै पढ्दै गएँ । म एकदिन विरामी पनि भएँ । रुपाली आन्टीले फोन गर्दा आमाले फोन नै अफ गरेर राखिदिनुभयो, मलाई औषधीउपचार गर्नुको साट्टो । होस्टेलको आन्टीले पनि मलाई तिमी पैसा नतिरेको मान्छे हो, नौ हजार तिर्ने विद्यार्थीलाई राख्नु प¥यो भन्दै मलाई कोठा सार्नु हुन्थ्यो । बिरामी भएको दिन आमाले लिन नआएपछि रुपाली आन्टी अत्तालिएर ‘तिम्रो आमाले कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भए, म पनि जिम्मा लिन सक्दिन्, आधा घण्टामा मेरो होस्टेल खाली गर भन्नुभयो ।’ भोलिपल्ट आमाले पनि होस्टेल छोड् भन्दै आफन्तकोमा जान भन्नुभयो । म छक्क परेँ । एक्कासी आमाले नै आफन्तकोमा जा भनेपछि म सबै सामान लिएर रक्षा नेपालमै गएँ । म रक्षा नेपाल गएपछि आमाले ‘अब त काँ जाने हो, जा यहाँ तेरो लागि कुनै पनि ठाउँ छैन’ भनेपछि म एक्कासी आत्तिएँ । मलाई अत्यन्तै दुःख महसुश भयो । मलाई रक्षा नेपालमा बस्न नदिएपछि म भाउजुको ठूलोबुबाको कोठामा गएँ । भोलिपल्ट पनि रक्षा नेपाल गएर आमा मेनुका थापासँग कुरा गर्दा पनि ‘त जाँ सुकै जा, यहाँ बस्न पाउँदिनस’् भन्नुभयो । त्यो दिन मलाई सावित्री पुडासैनीकोमा पठाइयो । यसरी मलाई कलेज पढिराखेको मान्छे कहिले कता त ? कहिले कता ? भन्दै पठाउने काम भयो । मेनुका आमाको त्यो ब्यवहारले मलाई अतिनै असैह्य पीडा महसुश भइरहेको छ । सावित्री पुडासैनी मसाजमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँको कोठामा पठाउन खोजेपछि म रक्षा नेपालको बाहिरै बसे । मुना दिदीले हिँड् जाँउ भनेपछि आमा लैनचौरकै सीप क्याँफेमा हुनुहुृन्थ्यो ।
आमा मेनुका थापाले मलाई भेट्ने वित्तिकै मोबाइलले मेरो नाकमा हिर्काउनु भयो । मुना दिदीलाई पनि यो घटना थाहा छ । मेरो नाकबाट रगत आयो, म बेहोस जस्तो भएर आफैँले त्यहि क्याँफेका दाईसँग पानी मागेर खाएँ । सावित्री दिदिले मलाई नाकमा लगाउने मलम र पेन किलर किनेर दिनुभयो । मलाई रातभरी जरो आयो । त्यो नाकको घाउ अहिलेसम्म दुखिरहेको छ । आमाले मलाई गर्दा अतिनै पीडा भएको छ । म सहनै नसकेपछि रानीपोखरी प्रहरी कार्यालयमा गएँ । तर आमाले मलाई आश्रय दिनेलाई नै उजुरी गरेको सुनेको छु । तर मैले त्यसअघि नै मामाको ज्यादती प्रहरीकोमा भनिसकेको छु । त्यो दिन प्रहरी कार्यालयबाट फोन गर्दा आमाको मोबाइलमा कल फरवार्ड गरिएको थियो । आफू पीडामा परेको कुरा मैले त्यहि जानकारी गराईसकेको छु । तर, त्यहाँबाट पनि मलाई लैनचौर गएर निवेदन देउ भनियो । म झनै पीडामा छु ।